Bogag Soomaliyeed oo ku dhiiraday baahinta qoraalo Islaamka lagu aflagaadaynaya. Taas oo aysan ku dhiiran karin kuwa gaaladu
Marka hore waxaa mahad leh Ilaah. Intaa kadib maalmahan waxaad moodaa qaabka khaldan ee loo fahmay kalmadaha fikrad dhiibasho iyo diimuquraadiyad in talaabadeedu dheeraatay oo ay gaadhay in bogagga Soomaaliyeed qaarkood baahiyaan qoraalo lagu aflagaadaynayo diinta Islaamka, Quraanka iyo Nabi Muxammed (s.c.w.). Kuwaas oo aad mooddo in loogu tala galay in dadka Soomaliyeed ee muslimiinta ah tashwiish looga furo diinta Islaamka!
Sidaa awgeed maqaalkan wuxuu ku socdaa oo baraarujin iyo digniin u yahay bogagga qoraaladaas baahiya, dadka qoraaladaas soo qora iyo guud ahaan shacabwaynaha Soomaliyeed ee muslimiinta ah. Arintaan waa muhiim ee haduu maqaalku kula dheeraado xoogaa dulqaada yeelo.
Bogagga qoraalada aflagaada ah baahiya:
Sidaan wada ognahay website-yada Somalidu leeyihiin aad ayay u fara bateen, isla markaasna intooda badan isku wax ayay qoraan. Dad badana waxay u arkaan inaysan u nafac badnayn sida ay u fara badan yihiin! Maadaama sababta lagu asaasay badankood ay tahay in reer hebel ay la tartamaan reer hebel, ama gobol hebel furto daaqad uu wax ku qoro, siduu gobol hebelba u furtay. Iyadoo waxa lagu tartamayo aysan ahayn cilmi diineed iyo mid aduunyo ama wax soo saar nafac u leh bulshada Soomaliyeed! Taas macnaheeda maaha inay bogagga Soomaliyeed oo dhan sidaas ku salaysan yihiin, balse waxaa jira kuwo nafac leh oo danta ummadda u taagan mase badna.
Si kastaba ha ahaatee website-yadaas waxaa ugu yaraan laga filayay inay leeyihiin siyaasad, xeerar iyo shuruudo u gaara. Taas oo ku wajahan qoraalada ay soo gudbinayaan iyo dadka ay kasoo gudbinayaan, maadama joornalada iyo website-yada caalamka ka jira badankood leeyihiin xeerar khaas u ah oo ay raacaan. Tusaale ahaan hadaan usoo qaadano kuwa reer Galbeedka ee dadku qaarkood ku daydaan, marnaba kuuma baahinayeen qoraal aad si cad ugu weerarayso shakhsi, bulsho ama diin. Sidoo kale marnaba uma aysan ogalaadeen nin iyaga dadkooda ah inay u baahiyaan qoraal uu ku amaanayo Islaamka inuu xal u yahay dadkooda. Sababtoo ah waxay ogyihiin in akhristayaashoodu waxaan xiiseenayn amaba akhrisanayn, balse ay xanaaqayaan oo ay aad uga soo horjeesanayaan joornaalkaas ama boggaas. Hadaba sidee ku dhacday in website-yo Soomaliyeed ay faafiyaan qoraalo lagu aflagaadaynayo Islaamka ama Nabi Muxammed (s.c.w.) iyo hooyooyyinkii mu�miniinta? Sideese ku dhacday inay ku dhiiradaan website-yadaas inay dadka Soomaliyeed ee muslimiinta ah usoo gudbiyaan waxyaalo dhaqankooda diineed aflagaadeenaya ama oranaya diinta Islaamka dib dhac ayay nagu ridaye, midda reer Galbeedka aan qaadano?! Waxaa laga yaabaa inay jawaabtu tahay dhawrkaan sababood ee soo socda midkood. Akrhistaha ayaana u dayn inuu kala dhex baxo midda ay noqon karto.
Sababta 1aad waxay noqon kartaa in tolnimo/gobol difaaciddii lagu asaasay bogaggaas khalad loo fahmay, oo qof kamida tolka hadduu qoraal aflagaadaynaya Islaamka soo qoro loo baahiyo iyadoo aan la iska eegayn waxa uu qoray. Qoraalkaas oo laga yaabo hadii badda lagu dhibcin lahaa inay wasakhoobi lahayd, xumaanta ka buuxda awgeed. Laakin maadama uu yahay ina hebel qoraalkiisu akhrin uma baahna, hadduu rabo Ilaahayba ha caayee!!! Waxaana xusid mudan hadalkii Nabi Shucayb uu tolkiis kuyiri suuratul-Huud �Tolkeygiyow jilibkaan ka dhashay miyaa idiinkaga qiimo badan Ilaahay?�. Haday ciladdu middan tahayna waxaa muuqata fashilaad xagga aqoonta iyo in la iska furtay daaqado caqli qabiil ku shaqeeya kuna dhisan tartan jaahilnimo iyo aqoon yari, wax manhaj ahna aan lahayn. Dhinaca kale lagama fakarin dadka qoraaladaan akhrisanaya inay yihiin dad Soomaliyeed oo muslimiin ah oo aan marnaba raali ka noqonayn wax Islaamka kasoo horjeeda! Hadaba waa yaabe bogagga qoraaladaas baahiyaa miyaysan ka fakarayn akhristayaashooda iyo bulshada ay la xiriirayaan? Mise dadka Soomaliyeed ayaa Islaamnimadooda qalooc lagu ogyahay oo waa la iskaga dhiiran karaa in wixii la doono loosoo gudbiyo oo ay akhristaan? Tolow dadka Soomalida halkee laga arkay salaad, soon iyo aqoon diineedba kuma yaree? Yaase eeda iska leh, kuwa baahiyaa mise kuwa lagu dhiiraday?
Sababta 2aad waxay noqon kartaa in khalad loo fahmay kalmada fikrad dhiibasho, taas oo bogagga Somalida ku badan ayadoo u qoran qaab af-English ah �Opinion�. Waase wax dhaca inta badan qofku markuu af uusan lahayn ku cusub yahay inuu kalmado badan khalad u fahmo ama si qaloocan u isticmaalo. Sidaa awgeed waxaa laga yabaa in dad badan kalmadaas u fahmeen qofkii afka kala furtaba in la iska baahiyo wuxuu yiraahdo. Iyadoo la is leeyahay dad diimuquraadiyad doon ah noqda! Miyaanan la ogayn kii keenay diimuquraadiyadaba inuu ku fashilmay oo caburin ka doorbiday maanta? Miyaananse la ogayn in diimuquraadiyada laftigeedaba ay ku salaysan tahay cid kaste inaan codkeeda la gudbin. Sanadahaan danbe miyaysan dad badani fahmin kalmado badan oo awal dadka qaarkood ka qarsoonaa? Haddii aysan dadka qaarkood wali fahmin, sanadaha soo socday mindhaa fahmi doonaan haduu Eebe idmo. Tolow website-yada Soomaliyeed sababtaan cudur daar ma u noqon kartaa?
Sababta 3aad waxay noqon kartaa ragga website-yadan iska leh ama masuulka ka ah inaysanba akhrin maqaalada loo soo diro, oo ay iska baahiyaan iyagoo xattaa aan isha marin waxay ku saabsan yihiiy qoraaladaas. Laakin haday iska akhrin lahaayeen ama labada indhood wax ku wada eegi lahaayeen, laga yaabi lahaa inay dad caqli badan yihiin oo aysan marnaba baahiyeen qoraalo Islaamka lagu aflagaadaynayo ama loogu tala galay in Soomalida diintooda tashwiish laga galiyo si loo asaaso fidno aan maanta dhex oolin dadka Soomaliyeed ee muslimiinta ah. Hadaba baraarug la�aantaas cudur daar ma u noqon website-yadaas? Waxaa kaloo qofku iswaydiin karaa oo maxaa dusha loo saartay mas�uuliyad aan laga bixi karin?
Sababtu miday doonto ha noqoto, laakin website-yadaas sinaba cudur daar ku heli maayaan Waxaana muhiima in la kala saaro tolnimo iyo Aakhiro seeg, sida ganacsiga iyo saaxiibtinimadaba loo kala saaro. Qofkii raba inuu Islaamka iyo Ilaahay la dagaalamo waa hawl isaga u gaara, ee maaha inuu adiga ku aafaysto oo kugu Aakhiro seejiyo magac toleed. Teeda kale waxaa is xusuusin mudan dadka Soomaliyeed inay muslimiin yihiin Islaamnimadoodana ku faansan yihiin meel kaste oo ay joogaan. Hadaba hadii iyaga loo adeegayo, maxaa loo baahinayaa qoraalo diintooda nadiifka ah kasoo horjeeda? Hadaad niyad fiican tihiin middaas oo ay dad badan idinku filayaan, shacabka bogagiina soo booqda ha isnecbaysiinina waxaan aqbali maayaane!
Hadaysan intaas aan soo sheegnay baraarujin noqon waydo, waxaa mudan inaad ogaataan inay jiraan dad qareeno muslimiina. Kuwaas oo u taagan inay dacweeyan bogagga Islaamka aflagaadeeya. Qareenadaas waxay degan yihiin UK waliba nidaamkoodu wuxuu awood u leeyahay, inay kaa dacweeyan dalka uu domain name-kaagu ka diiwan gashan yahay iyo inay la xiriiraan shirkadda webhosting-ka kusiisay. Luuqad kaste oo wax lagu aflagaadeeyo dad xubno ka ah ayaa u tarjuma. Taasna waxay goodi u tahay ninkii u bareeray waxyaalahas inuu baahiyo, waano inuu wax ku qaatana ogolayn.
Dadka soo qora aflagaadada:
THE STATUS OF MUSLIM CIVIL RIGHTS IN THE UNITED STATES 2005 | pdf
Marka hore waxaa fiican inay xasuustaan awoodda Ilaahay, ciqaabkiisa danbe iyo inuu Isagu diintaan leeyahay cid kaste oo hor istaageeda isku daydana aysan Aakhiro iyo aduunba liibaanayn. Marka 2aad waxaa mudan in la xusuusiyo dadka soo qora qoraaladaan inaan looga fadhiyin inay aflagaadeeyaan Islaamka. Balse in laga soo dhoofiyay dalkoodi iyagoo caqiido nadiifa wata, lagana sugayay in cilmi ama fikrad fiican oo ay dunida darfaheeda kasoo helaan dalka iyo dadka u keenaan. Sidii dadkii Japanka ahaaba dalkooda markay kasoo qaxeen dagaaladii lagu tilmaamay kuwii aduunka oo ay yimaadeen Galbeedka. Kadibna halkaas kala laabteen cilmi iyo horumar ay dadkoodi wax ku tareen, iyagoo aan la iman canbaarayn dhaqankoodi diineed, ama aan soo badalin. Kuwii soo badalayna waaba la gubay sida taariikhdooda ku qoran!
Tusaalahaas haduusan mid wax ku oola unoqon qolodaan, waxaa haboon in lagu baraarujiyo marka hore in la dagaalanka Islamka uusan bilaaban maanta oo ay rag badan uga horeeyeen dhamaantoodna baddu qaaday! Dad dibad soo aada oo falsafad bartana inaysan iyaga ugu horayn, balse waagii dawladihii Soomaaliya jireen, in rag badan Ruushka loo soo diri jiray iskuna dayeen dalka inay caqiidadiisa marin habaabiyaan! Maku guulaysteen? Jawaabtu waa maya oo maantayba Somali ka caqiido fiican tahay markii loo fiiriyo dagaaladii sokeeye kahor. Raggaasna sidoo kale badda ayaa qaaday ama diintoodi ayay iskaga soo laabteen.
Waxaa kaloo xusid mudan ninka aduunka ku damdamleeya oo cid walba xooga u sheegta in siyaasadiisa Islaam la dagaalanka ah iyo sirdoonyadiisaba ay jahawareereen. Waxoodina iskugu biyo shubteen maray Qur�aanka Kariimka musqulaha raaciyaan iyo maray yiraahdaan maanta waxan la hishiinaynaa ururada Islaamka. Waxaa kaloo dadkaas in lagu baraarujiyo mudan inuusan aduunku bilaaban 1918-kii, balse uu kumanaan sano soo jiray, xadaarado badana soo jireen, mid kastana lahayd xili ay dunida maamusho. Waxaa kaloo baraarujin mudan dadka Soomaliyeed inay yihiin dad muslimiin ah oo aan caqli xumo hayn kana deeqtoon gabar gaaloowday iyo wax la mida. Hadaba maxaa la isku daalin oo qoraalo aysan Soomalidu xiisaynayn wakhtiga la iskaga lumin. Maxaase loogu soo gabadaa aqoonta iyo ururada ardayda Soomaliyeed. Ma waxaa la yiri dadka Soomaliyeed waa jaahiliin oo ninkii aqoon yahan la baxa ama jabhad samaysta uun baa ka adag? Xaqiiqduse sidaa maaha, Soomalina dad aqoon, caqli iyo dadnimo u saaxiiba ayaa kujira. Kuwaas oo kala ah, kuwo aqoontoodi hore kasii kordhistay aduunka darfahiisa iyo kuwo dibadaha ku barbaaray waxna ku bartay habeen iyo maalina ku seexda sida dhibta looga bixi lahaa, dalkana diintiisa iyo dhaqankiisa loo dhawri lahaa, laakin fursadeeda sugaya.
Dadwaynaha Soomaliyeed ee muslimiinta ah:
Marka hore waxaad ogaataan in waajib na wada saaran yahay. Diinta Islaamkana cid si khaasa Ilaahay waardiye uga dhigay aysan jirin, wadaad si gaara u sheegan karana ma jiro. Balse dadka oo dhan qof kaste oo muslim ah, qaangaar ah, rag iyo dumarba masuuliyad ayaa ka saaran in Diinta Islaamka la dhawro. Qofkii ku xadgudbana runta loo sheego. Yaana lagugu harowsan aqoonta la iska sheeganayo waayahan danbe. Inay dad badan aqoonta iska sheegtaana wax beena maaha, laakiin waxaa markhaati noqon kara in dalal aduunka kamida badankood ka diidaan qofka Soomaliga ah shahaadada uu wato haduusan dal ay yaqaananan ama ku kalsoon yihiin kala imaan. Waxaadse ku baraarugsanaataa inay jiraan dad badan oo cid aan la aqoon u sheqeeya. Koleey dad uun beey u shaqeeyaan, laakin qoloda ay u shaqeeyaan dadka badankood ma yaqaanaan? Waana kuwa diinta dagaalka ku wada, iyo kuwo kale oo dalkoo idil NGO-yo la tagay, moodana in lagu soo yiri afka Soomaliga dalka ka tirtira, meeshii gargaar iyo horumar inay geeyaan laga filayay!
Marka 2aad waxaa kaloo iswaydiin mudan shirarkaan aqoonyahano kusheega ah ee Yurub ku qabtaan qaar kamida dadkaas, loona qabto intooda badan immaa in lacag lagu cuno ama lagu taageero nin dalka dagaal kawada, maxaa wax loogu tari waayay dadka Soomaliyeed ee Yurub ku dayacan? Maadaama hadaad fiiriso tirokoobka ajaanibta dalal kamida Yurub, Soomalidu waxay ku jiraan dadka ugu hooseeya dhinaca waxbarashada iyo shaqada! Dhalinyaradooduna waxaadba moodaa in lagu yiri dadka ugu fiican ee aad ku dayan kartaan waa dadka loo yaqaan Afro-American-ka. Kuwaas oo aad moodo in badankood lagu tarbiyadeeyay markay dhargaan inay heesaan oo ciyaaraan, surwaalo iyo silsilado waawayna xirtaan mustaqbalna ka fakarin. Markay gaajoodaana dhulka fasahaadiya! Balse waxaa xaqiiqa in Scandinavian-ka ka dhacday dadka aqoonta ama ururda sheegta qaarkood inay caruurta Soomaliyeed lugooyo noocaasa ku hayaan si ururkoodu u waayin dhaqaalaha ay caruurtaas kaga helaan dawladahaas. Hadaba qofkii garaad u saaxiibow fakar oo maxaa kula haboon!
Halkii Daqiiqoba Ameerika Waxaa Lag Dalbadaa Hal Masxaf Qur'aan ah::
Sida ay qortay shabakada IslamOnline, waxay hay'adda CAIR sheegtay in labadii toddobaad ee lasoo dhaafay laga dalbaday 5000 oo Kitaabka quraanka ah, waa halkii daqiiqoba hal masxaf Quraan ah ayaa la dalbanayey, arintaasi waxay ka dambeysey kaddib markii shabakada CAIR ay soo bandhigtay qoraal ay cinwaan uga dhigtay "Explore The Qu'aan" kaddib markii ay soo bexeen warar sheegaayey in Xabsiga Guantanamo Bay kitaabka musqul lagu ridey.
Tan 3aad waxaa khibrad musiibo noogu filan middaan qabiilka ee daba dheeraatay, taas oo aan Rabbi ka rajaynayno inuu naga saaro. Laakiin waxaa naxdin leh inaan khibradaas ka faa�iidaysan wayno oo cibro qaadasho noo noqon waydo indhahana ka laabano dad raba inay na galiyaan fidno ka daran midda na haysata. Taas oo ah tashwiish diineed iyo caqiido khaldan khilaafkeeduna uusan waligiis dhamaanayn sida taariikhda aduunka lagu yaqaan. Sidaa awgeed waa inaanan marna yeelin in dadka Soomaliyeed ee muslimiinta ah fikrado khaldan oo kuwii lahaaba ku nafacsan waayeen lagu dhex baahiyo. Teeda kale waxaad agootaan waxay bulsho ku dhisan tahay shacabkeeda. Wax uusan shacab wayneheedu aqbalayna cid socod siin karta majirto ee hadaba waajibkeena shacabnimo aan kasoo baxno oo qof walbow booska aad bulshada ku leedahay xagso yaysan duufaantu kasoo galine. Haday tabar daro dhinac kasta ah ku haysato, isku day inaan Islaamka dhinacaaga laga soo weerarin, dadkaagana lagugu garaacin, illayn maanta dadka wada dhashay ayaa la isku dilaaye.
Tan 4aad haweenaydii Kenyaatiga ahayd Professor Wangari Maathai ee ku guulaysatay arinta lagu tilmaamo �Nobel Peace Prize� ee laga baxshay dalka Norway 8-dii Oktoobar, 2004. Markii la siinayay biladaas teleefishino badan ayaa waraysi la yeeshay. Hadalka xikmadda ah oo ay ku hadashay habeenkaas wuxuu ahaa inay tiri,�markii lagu canbaareeyo oo lagugu tilmaamo inaad xaqiran tahay lagaana bad-badiyo, waxaad iska aaminaysaa inaad xaqiran tahay adigoo aan xaqirnayn. Kadibna niyadaa kaa jabaysa ismana difaaci kartid waxna ma qabsan kartid�. Hadaba marna yaysan kaa dhaadhicin inaad tahay qof liita. Maadaama dadka maqaalada aflagaadada ah qora ay ku andacoodaan Soomalidu waa dad liita, dadka hormarayna ka haray. Meesha ay sidaa ka leeyihiin waxaa fiicnaan lahayd inay tilmaamaan dhaqanka ama falka xun inuu liito ee aysan dadku liidan oo ay fiicnaan lahayd inay mid ka wanaagsan la yimaadaan. Waa yaabe ma Soomali oo dhan ayaa liidata, maxaase bulshadoo dhan loo aflagaadayn?
Ugu danbaytii waxaa is xusuusin mudan in bulsho kaste dhaqankeeda diineed ee soo jireenka ahaa ku faansan yihiin oo ilaalsadaan. Raalina kama noqdaan in dadkooda lagu dhex baahiyo caqiido kale oo lid ku ah midda ay haysan jireen waligood, xattaa haday khaldan tahay. Hadaba anagoo caqiido nadiifa iyo diin saxiixa haysana sidee uga raali noqonay in website-yo Soomaliyeed waxaas noosoo bandhigaan? Teeda kale waxaa baraarujin mudan dhowridda diinta Islaamka maaha wax u baahan dagaal iyo inaad xoog lahaato kaliya, laakin qof walba inta awoodiis ah waa inuu ku difaacaa diinta. Haday ahaan lahayd maqaal, email qorid ama dood sharafeed. Hadaadan intaas midna awood u lahayn, taageer cidda u istaagta arimahaas.